Samsung Smart Switch Mobile 3.6.09.6 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.6.09.6 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား ကိရိယာမ်ား Samsung Smart Switch Mobile
Samsung Smart Switch Mobile ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
▣စမတ်ပြောင်းလဲမည်သင်သည်သင်၏အဆက်အသွယ်များ, ဂီတ, ဓါတ်ပုံများ, ပြက္ခဒိန်, စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများ, ကိရိယာ settings ကိုနှင့်သင့်အသစ်များကိုက Galaxy device ကိုမှပိုပြီးရွှေ့ဖို့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးသည်။ Plus အား, Smart ပြောင်းလဲမည်™သင်™သင်အကြိုက်ဆုံး apps များတွေ့ပါသို့မဟုတ် Google အပေါ်အလားတူသူတွေကို Play အကြံပြုကူညီပေးသည်။
•က Android ™ပိုင်ရှင်တွေ
- ကြိုးမဲ့လွှဲပြောင်း: အန်းဒရွိုက် 4.0 သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မား
- က Galaxy device ကိုမှတစ်ဦးသဟဇာတက Android device မှကြိုးမဲ့လွှဲပြောင်း: အန်းဒရွိုက် 4.0 သို့မဟုတ်မြင့်မားသော (6.0 ထက်ကို Android ဗားရှင်းအနိမ့်နဲ့ Non-Samsung ကပစ္စည်းတွေမှတ်ချက်တစ်ခုသာမိုဘိုင်း AP ကိုထောက်ပံ့သောက Galaxy devices များနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ )
- က Wired လွှဲပြောင်း: အန်းဒရွိုက် 4.3 သို့မဟုတ်မြင့်မားသော, charger ကို cable ကို, နှင့် USB connector ကို
• iOS ကို™ပိုင်ရှင်တွေ - သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးင်သော option ကိုသုံးပါ:
- သင့်ရဲ့ Galaxy ရန်သင့်ကို iOS device မှက Wired လွှဲပြောင်း: iOS ကို 5.0 သို့မဟုတ်အထက်, ကို iOS device ကို cable ကို (လျှပ်စီးသို့မဟုတ်အသက် 30 pin ကို), နှင့် USB connector ကို
iOS က 4.2.1 အထက်နှင့် Apple ID ကို: - iCloud ™မှတင်သွင်း
- iTunes ကို™သုံးပြီး PC မှာ / Mac ကိုလွှဲပြောင်း: စမတ်ပြောင်းလဲမည်ကို PC / Mac အတွက် software များ - http://www.samsung.com/smartswitch စတင် Get
• BlackBerry ကို™ပိုင်ရှင်တွေ
- ကြိုးမဲ့လွှဲပြောင်း: BlackBerry ကို OS က7သို့မဟုတ် 10 (မိုဘိုင်း AP) ကို
- သင့်ရဲ့ Galaxy ရန်သင့် BlackBerry ကိုကိရိယာမှ Wired လွှဲပြောင်း: BlackBerry ကို OS က7သို့မဟုတ် 10 လွှဲပြောင်းဘို့ကို USB connector ကိုမှတဆင့်
• Windows ကို™မိုဘိုင်းပိုင်ရှင်တွေ
- ကြိုးမဲ့လွှဲပြောင်း: မှာ Windows OS ကို 8.1 သို့မဟုတ် 10
* မှတ်ချက်: ပိုပြီးသတင်းအချက်အလက်နှင့် step-by-ခြေလှမ်းလမ်းညွန်များအတွက် http://www.samsung.com/smartswitch ကိုသွား
- ဆက်သွယ်ရန်, ပြက္ခဒိန် (သာ Device ကိုအကြောင်းအရာ), မက်ဆေ့ခ်ျများ, ဓာတ်ပုံများ, ဂီတ (DRM အခမဲ့အကြောင်းအရာသာ, iCloud အဘို့ထောက်ခံမ), ဗွီဒီယိုများ (သာ DRM အခမဲ့အကြောင်းအရာ), ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းများ, မှတ်စုများ, နှိုးစက်, Wi-Fi နောက်ခံပုံများ, စာရွက်စာတမ်းများ, app ကိုဒေတာ (သာက Galaxy devices များ), အိမ်မှာအပြင်အဆင် (သာက Galaxy devices များ)
- သင်က M OS ကို (Galaxy S6 သို့မဟုတ်မြင့်မားသော) ရန်သင့်သည် Galaxy device ကိုအဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြင့် app ကို data နဲ့အိမ်ပြန်အပြင်အဆင်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
* မှတ်ချက်: device ကိုပေါ်နှင့် SD ကဒ် (မသုံးလျှင်) အနေဖြင့်သိမ်းဆည်းထားစမတ်ပြောင်းလဲမည် Scan ဖတ်ခြင်းနှင့်လွှဲပြောင်းအကြောင်းအရာ။
▣ဘယ် Device များထောက်ခံကြသလဲ
•က Galaxy: လတ်တလောက Galaxy မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်နှင့် tablet (က Galaxy S2 မှ)
* မှတ်ချက်: Galaxy S2, အဟောင်းကို OS ကို (GB / ICS) ဗားရှင်းသည်သဟဇာတမဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့ S2 စနစ်တကျအလုပ်လုပ်မပါဘူးဆိုရင်, firmware ကို update ကိုအပြီးစမ်းကြည့်ပါ။
•အခြား Android ထုတ်ကုန်:
- ကို HTC, LG Sony က, Huawei Lenovo က, Motorola PANTECH, Panasonic Kyocera, NEC လက်မ SHARP, Fujitsu, Xiaomi က, Vivo, Oppo, Coolpad (DazenF2), RIM (Priv), YotaPhone, ZTE က (Nubia Z9), ကို Gionee , ချော်ရည်, MyPhone (My28s), ချယ်ရီမိုဘိုင်း Google က (Pixel / Pixel2)
* မှတ်ချက်: ထိုကဲ့သို့သော devices များအကြားလိုက်ဖက်မှုအဖြစ်ကိစ္စတွေကြောင့်အချို့သောကိရိယာများပေါ်တွင်မတ်ပြောင်းလဲမည်တပ်ဆင်ရန်နှင့်သုံးစွဲဖို့ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ဒေတာလွှဲပြောင်းရန် 1. နှစ်ဦးစလုံး devices တွေကိုသူတို့ရဲ့ပြည်တွင်းရေးမှတ်ဉာဏ်အတွက် 500 MB အထိနေရာလွတ်တစ်ခုအနည်းဆုံးရှိရမည်။
2. သင်တစ်ဦးကို Wireless Connection ကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုပါကသင့်ရဲ့ device ကိုအကြောင်းအရာလွှဲပြောင်းခံရဖို့ခွင့်ပြုမယ့် '' မီဒီယာဖိုင် (MTP) လွှဲပြောင်းခြင်း '' ကို USB option ကိုထောကျပံ့ရမည်ဖြစ်သည်။
3. သငျသညျ, အဆက်မပြတ်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်မှပြတ်တောက်သွားပါသည်ကြောင့် non-Samsung က device ကိုရှိသင့်ရဲ့ device ကိုပေါ်အဆင့်မြင့် Wi-Fi ကိုသွားပါလျှင်, ကို turn off "ကို Wi-Fi ကို initialise" နှင့်ရွေးချယ်စရာ "အနိမ့် Wi-Fi ကို signal ကိုအဆက်ဖြတ်လိုက်ပါ" နှင့်ကြိုးစားကြည့် နောက်တဖန်။
(အထက်ဖော်ပြထားတဲ့ရွေးချယ်စရာသင့်ရဲ့ device ကိုထုတ်လုပ်သူနဲ့ OS ဗားရှင်းအပေါ်မူတည်ပြီးရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ )
။ ဖုန်းနံပါတ်: ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းဒေတာလွှဲပြောင်းရန်အသုံးပြု
။ ဆက်သွယ်ရန်: အဆက်အသွယ်ဒေတာလွှဲပြောင်းရန်အသုံးပြု
။ ပြက္ခဒိန်: ပြက္ခဒိန်ဒေတာများကိုလွှဲပြောင်းရန်အသုံးပြု
။ SMS ကို: SMS ကိုဒေတာလွှဲပြောင်းရန်အသုံးပြု
။ သိုလှောင်မှု: ဒေတာ transfer များအတွက်လိုအပ်သောဖိုင်များကိုကယ်ဖို့အသုံးပြု
။ မိုက်ခရိုဖုန်း: က Galaxy devices များရှာဖွေနေသည့်အခါကြိမ်နှုန်းမြင့်အသံများအတွက်အသုံးပြု
။ တည်နေရာ: Bluetooth ကိုသုံးပြီးက Galaxy devices များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အသုံးပြု
Samsung Smart Switch Mobile အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Samsung Smart Switch Mobile အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Samsung Smart Switch Mobile အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Samsung Smart Switch Mobile အား အခ်က္ျပပါ
emad64 စတိုး 47 44.12k
Samsung Smart Switch Mobile ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Samsung Smart Switch Mobile အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.6.09.6
ထုတ်လုပ်သူ Samsung Electronics MSDG
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://account.samsung.com/membership/terms
Release date: 2019-09-10 02:59:58
Samsung Smart Switch Mobile APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ